उडिसामा भएको प्रतियोगितामा नेपाल फाइनलमा म्यानमारसँग हार्दा उप विजेता भए पनि नेपाली टोलीका लागि उपाधि जितेबराबरकै खुसी भयो सार्क महिला फुटबलको बलियो टिम भारतलाई हराउनु । यसको नायक बनेकी थिइन् २२ वर्षिया सावित्रा भण्डारी उर्फ साम्बा ।
'रिदम टाइमिङका बारेमा केही थाहा थिएन । ताल मिलिहाल्छ नि भनेको भरे त पूरै फेल खायौँ । अहिले त्यस्तो भएको भए त ट्रोल बनिसक्थ्यो !’
प्रेम विवाहका कारणले समाजमा अपराध निम्त्याएका छन् । कतिपयको फेसबुकबाट लभ पर्ने र यसपछि प्रेम विवाह हुन्छ । तर प्रेम विवाह लामो समयसम्म नटिक्ने घटना पनि देखिन्छन् ।
मौलिक प्रेम दिवसको खोजी
सामाजिक सञ्जालमा बहस सुरु हुन्छ, टोले चियापसलमा चिया गफ । कसैले फागुपूर्णिमालाई प्रेम दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने तर्क राख्छन् कसैले कामदेव र रतिको महोत्सव पारेर ।
यो वर्षका प्रेमको भिलियन ६ राशि
राशि अनुसार सन् २०१९ मा ६ वटा राशि भएकाहरुका लागि त्यत्ति सुखद संकेत देखिएन । बाँकी राशि भएकाहरुको प्रेम यात्रा भने राम्रो देखिन्छ ।
कुनै कुरामा परिवर्तन गर्न खोजिन्छ भने मष्तिस्क, शरीर साथै हाम्रो वरिपरि रहने मानिसले प्रतिरोध गर्छन् । त्यसैले उचित आशा राख्नु ।
अश्लील फिल्म उद्योग (पोर्न इन्डस्ट्री) मा यौन शोषणका घटना कयौँ घटे होलान् तर ती गुपचुप हुन्थे । यस्तोमा अचानक एक महिलाले बोल्ने निधो गरिन् । यो निधोले पोर्न उद्योगमा तीव्र प्रतिक्रिया जन्मियो र कयौँ कलाकारलाई त्यसको लपेटामा पार्यो ।
बाङ्लादेशमा चीन-भारतसँग शक्ति सन्तुलन चुनाैती
‘चीनसँग बाङ्लादेशले सैन्य मुद्दासँगै आर्थिक सम्बन्धलाई पनि जोड दिएको छ र यसमा त्यति धेरै जटिलता पनि छैन । तर भारतसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा सामञ्जस्य बनाउन चाहिँ महत्वको कुरा हुनेछ ।’
नेपालमा घडिको सुई चाँडो चले पनि भयो के ? विकासको दृष्टिले हेर्ने हो भने धेरै पछाडि छ । मनोवैज्ञानिक तवरले पनि हामी पछाडि नै छाैं
आलोचना एक डिस्ट्र्याक्सन हो । तपाईं त लक्ष्यका साथ हिँडेको रेल हुनुहुन्छ । तपाईंको आफ्नै गति र गन्तव्य हुन्छ । ट्र्याकमा उभिएको हरेक व्यक्तिका लागि तपाईं रोकिन थाल्नुभयो भने गन्तव्यमा पुगिएला ?
क्रिसमस क्रेज ः समभाव कि अतिक्रमण
धर्मको आँकडा हेर्ने हो भने नेपाल हिन्दू बाहुल देश हो । तर चाडपर्वको उत्साह र रौनकमा धर्मले बाधा पुर्याउँदैन यहाँ । दसैं तिहार त भइगयो, अन्य धार्मिक समुदायले मनाउने क्रिसमस होस् या अन्य पर्व त्यसमा पनि मज्जाले सहभागी हुन्छन् हिन्दू पनि ।
एक मोडलको बयान ‘हो, म गे हुँ’
मलाई केटीप्रति फिलिङ्स नआए पनि देखाउनकै लागि आफू मात्तिएको अभिनय गरेँ र मेरो मंगेतरलाई कोठामा जाउँ भन्न थालेँ । मेरो मनमा भने उसैले नाइँ भने हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो तर त्यस्तो भएन ।
बेइमानी सिक्दै गुरिल्ला
प्रायः हामीले बाँदरबीच एकअर्काले खाने खाना चोरेको र चोर्न नपाए एकअर्कामै कुटपिट गरेको देखेका छौँ तर लामो समयदेखि गुरिल्लामाथि शोध गरिरहेका वैज्ञानिकहरुले भने गुरिल्लाहरु पनि बेइमानीमा कम नभएको बताउन थालेका छन् ।
असफलताको प्रमुख कारणहरु मध्येको एक अर्को पूर्व तयारी नगर्नु पनि हो । हामीलाई टाइटानिक पानी जहाजको बारेमा थाहै छ । हलिउडमा यसबारे फिल्म पनि निर्माण भएको छ । टाइटानिक त्यस समयको सबैभन्दा भव्य पानीजहाज थियो । त्यसमा यात्रा गर्न पाउनु गौरवको कुरा थियो ।
जब कुनै क्षेत्रमा कुनै चिजको अति बढी माग हुन्छ भने त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनु अति गाह्रो हुन्छ । यस्तै अवस्था पोर्नका बारेमा पनि भन्न सकिन्छ ।